Snapchat သည်မျက်နှာအသစ်များ၊ | Gadget သတင်း
Snapchat ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတွေနဲ့ update လုပ်တယ်
ပါပလော Aparicio | | မိုဘိုင်း, NOTICIAS, လူမှုရေးကွန်ယက်
"ပုဂ္ဂလိက" လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application Snapchat ရုံ updated တယ် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အမှတ်အသားအသစ်တွေ၊ Needs Love (Needs love) လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းအသစ်နဲ့ကင်မရာအတွက်ညအိပ်စက်ခြင်းအသစ်တွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။
Snapchat သည် chat ပို့ခြင်းနှင့် multimedia ဖိုင်များထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း (သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုခြင်း) ကို Snapchat ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ရုတ်တရက်ကျိုးပဲ့သွားသောတတိယပါတီဖောက်သည်များအားပိတ်ဆို့ရန်အဆိုပြုသည့်အချိန်ကတည်းကအချိန်ကာလအားဖြင့်ကြီးမားသောဆွဲဆောင်မှုကိုခံနေရသည်။ ဤဖိုင်များနှင့်ပင်စကားပြောဆိုမှုသမိုင်းကိုကယ်တင်ရန်။
1 Snapchat emoticons ၏အဓိပ္ပါယ်
8 Snapchat update ၏အခြားအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ
Snapchat emoticons ၏အဓိပ္ပါယ်
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက Snapchat သည် third-party client များကိုစတင်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုအတွက်လျော်ကြေးပေးဖို့ဖြစ်ကောင်း, လျှောက်လွှာယခုလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်နီးပါးနီးပါးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသတင်းနှင့်အတူ updated ခဲ့သည်။ ဤအသစ်အဆန်းများအနက်အချို့သည်အခြားသူများထက်ထူးကဲသောအရာတစ်ခုရှိနိုင်သည် Snapchat အပေါ်အသစ်သောအပြုံးများ chats preview ဘေးတွင်ပေါ်လာသော emoji များကဲ့သို့ပုံဖော်ထားသည်။ သို့သော်ဤသေးငယ်သောမျက်နှာများနှင့်အခြားသင်္ကေတများကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ သင်သိပြီးသားနှင့်သူတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီးသားဖြစ်ဖွယ်ရှိသော်လည်းအောက်တွင်သင့်အားရှင်းပြပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များထဲမှတစ်ခုဘေးတွင်အပြုံးမျက်နှာတစ်ခုကိုတွေ့ပါကဤအဆက်အသွယ်သည်ဆိုလိုသည် Snapchat ပေါ်မှာငါတို့၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ် ဦးဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး။ အကောင်းဆုံးအတွက်နေရာတစ်နေရာသာရှိသောကြောင့်ဤမိတ်ဆွေသည်ဒုတိယ၊ တတိယသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုကောင်းကောင်းရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူနှင့်သူမနှင့်ချက်တင်စကားဆက်ပြီးသူ၏အိုင်ကွန်ကိုရွှေနှလုံးသို့မပြောင်းလဲပါကသူသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ ။
Snapchat ၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်အပြုံးများဖြင့်မျက်နှာနှစ်မျိုးရှိသည် - ပို၍ သတိပညာရှိသောပါးစပ်ပါးစပ်သာကွေးကာမျက်လုံးများပိတ်ထားသည်။ မျက်လုံးဖွင့ ်၍ သွားများမြင်နိုင်သော ပို၍ ပါးနပ်သည်။ ဒုတိယအပြုံးများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များထဲမှတစ်ခုအထက်တွင်တွေ့ပါကဆိုလိုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနံပါတ် ၁ မှာသူ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနံပါတ် ၁ ဖြစ်သည်.
ကျွန်တော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနံပါတ် ၁ အဖြစ် Vicente ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့ရင် Vicente ဟာတတိယမြောက်သူငယ်ချင်းAndrésရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ရမယ်၊ Vicente မှာအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များထဲမှတစ်ခုဘေးတွင်နေကာမျက်မှန်တပ်ထားသောမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါက၎င်းအဆက်အသွယ်သည်အလွန်နေသာသောနေရာတွင်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဆိုလိုတာကဒါ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများအနက်မှတစ်ခုမှာသူ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တွင် Pepe အမည်ရှိအဆက်အသွယ်ရှိသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် (သူသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ထိုသူငယ်ချင်းသည်အခြားပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါကမဟုတ်ပါ) ငါဟိုဆေးအမည်ရှိ Snapchat အပေါ်အခြားမိတ်ဆွေတစ်ရှိသည်။ ကောင်းပြီ၊ Pepe ဟာဟိုဆေးရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆိုရင်ငါဟိုဆေးရဲ့ချက်တင်မှာနေရောင်ကာမျက်မှန်နဲ့မျက်နှာမျက်နှာသဏ္ဌာန်ကိုငါတွေ့လိမ့်မယ်။ ဟိုဆေးကငါမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့နေရောင်ကာမျက်မှန်တပ်ထားတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးငါချက်ထိပ်မှာနေပြီးနေရောင်နေကာမျက်မှန်တပ်တာကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ နောက်မှရှင်းပြမည့်အဓိပ္ပာယ်မှာဘေးတိုက်ကြည့်နေသောတ ဦး တည်းဖြစ်သည်။
ဒီရုပ်ပြောင်ကိုသဘာဝအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ "ငါမင်းကိုတွေ့ပြီ"၊ "ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်" ဟုဆိုလိုနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ပို့သူကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းတာက၊ Snapchat ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပိုပြီးရှင်းလင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဆက်အသွယ်များထဲမှဘေးတစ်ဖက်ကိုမျက်နှာတစ်ဖက်စီမြင်နေလျှင်၊ ငါတို့ကမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါ၊ ဒါပေမယ့်သူကငါတို့လိုမဟုတ်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်း Pepa နှင့်စကားများစွာပြောခဲ့ပြီး Pepa သည်အခြားသူနှင့်စကားမပြောနိုင်ပါကသူမသည်သူမ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ပိုပြီး Snapchatted လုပ်ရင်နောက်တစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်အခြားအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင် Pepa ၏ချက်တင်စကားပြောမျက်နှာပြင်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည် Pepa သည်ပြုံးနေသောမျက်နှာကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အဆက်အသွယ်များထဲမှတစ်ယောက်၏စကားပြောခန်းတွင်ရွှေရောင်နှလုံးသားကိုတွေ့မြင်လျှင်၎င်းသည်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ Snapchat အကြောင်းကောင်းသောဆက်ဆံရေးရှိသည်ဟုယူဆသည်။ ရွှေနှလုံးဆိုတာငါတို့ဆိုလိုတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနံပါတ် ၁ ဖြစ်ပြီးထိုလူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနံပါတ် ၁ ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိရင်ဘဏ္hasာတစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ထိုဘဏ္treာကို Snapchat တွင်ရွှေရောင်နှလုံးသားရုပ်လုံးဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။
El မီးတောက်အိုင်ကွန် ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂလိပ် - Saxon အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြု၍ ယခုအချိန်တွင်ထိုသူအား“ မီး” ဟုခေါ်နိုင်သည်။ ဘတ်စကတ်ဘောကဲ့သို့သောအားကစားများ၌အထူးသဖြင့် NBA ဖြစ်သည်၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောနိုင်ငံတွင်ကစားသောကြောင့်ကစားသမားတစ် ဦး သည်အကြိမ်များစွာရမှတ်များနှင့်ရမှတ်များရသောအခါသူသည်“ မီးလောင်နေသော” ဖြစ်သည်၊ "on" ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က "ပလပ်။ " ဟူသောစကားလုံးပိုမိုအသုံးပြုလိမ့်မယ် Snapchat တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များထဲမှတစ်ခု၏ချက်တင်အထက်မီးလျှံကိုမြင်တွေ့ရပါက၎င်းအဆက်အသွယ်နှင့်“ ဆက်သွယ်ခြင်း” ကိုဆိုလိုသည်။ ကျနော်တို့ snapchatting ခဲ့ကြရတယ် သူသို့မဟုတ်သူမ၏ (မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နှင့်လက်ခံရရှိ) နှင့်အတူ ရက်ပေါင်းများစွာဆက်တိုက်။ ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲရပ်တန့်ပါကမီးတောက်အားလုံးထွက်သွားသလိုလိုပင်။
Snapchat update ၏အခြားအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သော Snapchat သင်္ကေတများအပြင်ကင်မရာတွင်လည်းတိုးတက်မှုများရှိနေပြီး၎င်းသည်ယခုအခါဖြစ်သည် flash switch ဘေးရှိလခြမ်းအိုင်ကွန်နှိပ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကင်မရာသည် ISO sensitivity ကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည် ရှင်းလင်းသည့်ဓာတ်ပုံများ အလင်းရောင်နည်းသောအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရလဒ်သည်အရည်အသွေးကျဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးပုံရိပ်ထဲတွင်ဆူညံသံများပိုမိုထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုရမည်။
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းအသစ်တခုရလိမ့်မယ် «သူတို့ကချစ်ဖို့လိုတယ်» snaps များပို့ခြင်းအတွက်မည်သည့်အဆက်အသွယ်များပေါ်လာမည်၊ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်းကိုမလုပ်တော့ပါ။
ဒီနှင့် Snapchat ရဲ့အသစ်သောအတိုင်းအတာအကြား Third-party apps များ၏အသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပင်ထားသည် ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများ၏ privacy ကိုထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း၊ လျှောက်လွှာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကောင်းမွန်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Whastapp နှင့်မတူဘဲဤလူများသည်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေခြင်းသည်ဓာတ်ပုံများကိုပို့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောင်မြင်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ကြီးမားသောတာ ၀ န်ရှိသည်။ သူတို့သည်၎င်းတို့အားလျှောက်လွှာကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်အားပေးသည့်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေပြီး၊ ကဏ္ as ကဲ့သို့မကြာသေးမီကတင်ပြခဲ့သောအရာများအားထည့်သွင်းထားသည်။ «ရှာဖွေရန်»National Geographic ကဲ့သို့သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလမ်းကြောင်းများမှပုံပြင်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။
တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုအကြိမ်မည်သူမဆိုဆာဗာသို့ ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်ဟုဆိုလျှင်အမှားတစ်ခုရလိမ့်မည်။ အချိန်နှင့်အမျှ Snapchat သည်၎င်းတို့၏တရား ၀ င်မဟုတ်သော application အမျိုးအစားများအားဖြင့်၎င်းတို့၏ဆာဗာများအသုံးပြုခွင့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုများစွာအကျိုးပြုသည်။
NSA သူလျှိုသတင်းအချက်အလက်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ privacy ကိုပိုပြီးကြည့်ရှုသူများများလာသည်။ messaging application များနှင့် ပတ်သက်၍ WhatsApp သည်ဤစျေးကွက်ကိုဆက်လက်လွှမ်းမိုးထားဆဲဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အား (သူတို့နှင့်လိမ်လည်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း) ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကတိပေးမည့်ရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေနေသည်။ မည်သည့်ပလက်ဖောင်း, ဒါမှမဟုတ် Snapchatအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းပေးထားသည့်အလွန်လုံခြုံသောအခြား application တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Snapchat ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတွေနဲ့ update လုပ်တယ်
33 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Windows Phone အသုံးပြုသူများသည် third-party application များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမှအကျိုးများစွာရရှိသည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့အားတရားဝင်ပေးထားသော option ဖြစ်သော NONE ဖြစ်ပြီးမည်သည့်အထောက်အပံ့တောင်းဆိုချက်ကိုမျှမတက်ရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရှက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ CEO တစ်ယောက်အနေဖြင့်သူ၏ကုမ္ပဏီအားစျေးကွက်နှင့်နီးစပ်သူများကိုခွင့်မပြုသင့်ပါ။
အဘယ်ကြောင့် Emoticons ဘေးတွင်နံပါတ်များရှိသနည်း
ကျနော့်အဆိုအရ၊ သင်ဟာအခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့စခရင်ရိုက်ကူးမှုကိုရိုက်တဲ့အခါမှာဘေးတိုက်ရင်ဆိုင်ရသည် ...
????? <—- esaaa !! အံသွားနှစ်ဖက်စလုံးကိုပြနေသောမျက်နှာအနည်းငယ်သည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
၏မျက်နှာ ???? ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?
သင်၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်တိုက်ဆိုင်သောလူအမြောက်အများရှိသည်ဟူသောအချက်ကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်မှအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားယုံကြည်စေပါသည်။ ဒါမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု) ။
နောက်ဆုံးတော့ခင်ဗျားဟာမျက်နှာအသစ်တွေအကြောင်းမေးနေတာကိုတွေ့ပြီ၊ အမှန်တရားကတော့ငါသူတို့ကိုမတွေ့ရဘူး၊ အကယ်လို့သင်ဟာမျက်နှာပြင်တစ်ခုတင်လိုက်ရင်၊ ငါအဲဒီအကြောင်းစစလေ့လာတော့မယ်၊ ဆောင်းပါးကိုဝေမျှဖို့မမေ့ပါနဲ့၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ငါသူတို့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့တုန်းကငါဟာအတော်လေးရှုံးနိမ့်သွားတယ်၊ ဒီကိစ္စကဘာလဲဆိုတာကိုလူတွေသိအောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်။ စာဖတ်သူတွေအားလုံးကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်တယ်။ 😀
^^ ကိုသင် http://www.imgur.com/ သို့ တင်၍ ဓာတ်ပုံကို upload တင်လိုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နောက်တွင်ဒီမှာ link တစ်ခုတင်ပါ။ ကံကောင်းပါစေ။
အပြုံးနှင့်ပြောင်ပြောင်တောက်နေသည့်မျက်နှာနှင့် ပက်သက်၍ မေးမြန်းသူများအနေဖြင့်ထိုသူသည်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုသည်
Kellymar Perez Ramirez ဟုသူကပြောသည်
Kellymar Perez Ramirez အားပြန်ပြောပါ
သွားနည်းနည်းလား ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်တူညီသောအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနံပါတ် ၁ ကိုမျှဝေခြင်းကိုဆိုလိုသည်
? နှစ် ဦး စလုံးသည်အခြားတစ်ခု၏နံပါတ် ၁ ဖြစ်သည်
? သူတို့က # 1 တူညီသောလူတစ် ဦး ရှိသည်
? သူတို့မကြာခဏ snapchatean
လျှပ်တစ်ပြက်ဘေးရှိလခြမ်းကိုမည်သို့ပြမည်နည်း။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြတယ်။ ?
တဝက် luma ငါ့ကိုဖမ်းယူသောအရာကိုအဘို့အဘယ်သို့သောအဘယ်သို့ငါပြုပါ။
ကျွန်တော့် Snapchat ပေါ်ရှိလွင့်စင်အနီးအဘယ်ကြောင့်ပေါ်မလာသနည်း။
?? ?? မီးခိုးရောင်အရောင်၏အိုင်ကွန်သည်မည်သည့်အရာကိုသိသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်း Spartan ၏တိုးတက်မှုကိုကြည့်ပါ